ကယ်ဆယ်ရေး Wings! မင်းကိုလေယာဉ်ပေါ်တင်ပြီးခွေး Scruffy ကိုကူညီပါ Androidsis
ဒီခွေးဟာ Scruffy ရဲ့လေယာဉ်ပေါ်ကမီးသတ်သမားဖြစ်ပြီးသင်ကယ်ဆယ်ရေး Wings မှာကူညီရမယ်။
Rescue Wings သည်ငြင်းပယ်နိုင်သောအရည်အသွေးရှိသောပေါ့ပေါ့ပါးပါး Freemium တစ်ခုဖြစ်သည်သူက Scruffy ခွေး ဦး ဆောင်တဲ့လေယာဉ်တစ်ခုလုံးကိုသယ်ဆောင်သွားမှာပါ။ Side-scrolling 2D format ဖြင့်လေယာဉ်ပျံကိုထိန်းချုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခေါ်ဆောင်သွားမည့် Android အတွက်ခေါင်းစဉ်။
ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ Scruffy လို့ခေါ်တဲ့ခွေးတစ်ကောင် ၎င်း၏ပိုင်ရှင်၏ငိုက်သူသည်ရေကန်များရှိရေကိုစုဆောင်းရန်လေယာဉ်ကိုယူပြီးဒေသတွင်း၌မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နွေရာသီအပူကိုပိတ်ရန်သင်အလုပ်လုပ်ရမည့် freemium ခေါင်းစဉ်အတွက်ပြင်ဆင်ပါ။
2 ကယ်ဆယ်ရေး Wings ရှိလေယာဉ်အသစ်များကိုရယူပါ
3 စုစုပေါင်း 15 အဆင့်ဆင့်
Scruffy သည်ခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည် သူ့သခင်နှင့်အတူအိပ်ပျော်နေသောမီးခိုးငွေ့များကိုပြတင်းပေါက်မှတဆင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်မီးလောင်နေသည်ကိုသူသတိပြုမိသည်။ မာစတာသည်သူ၏နက်ရှိုင်းသောအိပ်မက်များကိုဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖော်ရွေသောခွေးသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအလျင်အမြန်သွားပြီးလေယာဉ်ပေါ်တက်ပြီး Rescue Wings ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောဇာတ်လမ်းကိုစတင်ခဲ့သည်။
သင်လုပ်ရမည့် Android အတွက်ခေါင်းစဉ်သစ် ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုနှင့်အတူလေယာဉ်ကိုဘယ်လိုလည်ပတ်ရမယ်ဆိုတာသိတယ် အလွန်ရိုးရှင်း ငါတို့နှာခေါင်းမြှင့်ပြီးနောက်တစ်ခုကိုလျှော့ချရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တစ်ခုရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တောင့်တင်းသောသစ်တောမီးများဖြည့်တင်းရန်လိုအပ်သောရေတိုင်ကီများကိုဖြည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လေယာဉ်ကိုအိုင်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။
လေယာဉ်ရဲ့အမြန်နှုန်းကိုတိုးမြှင့်ဖို့ခလုတ်တစ်ခုရှိတယ် ထိုရေကို drop ထိုထိန်းချုပ်မှုမရှိသောမီးလောင်ကျွမ်းမှုများကြောင့်သစ်တောများကိုနေရင်းဒေသများဆုံးရှုံးမှုမှကာကွယ်နိုင်သည်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် Rescue Wings နှင့်ပျော့ပျောင်းသောအရောင်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှုံးနိမ့်မှုများကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်ကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးလေ့ရှိသောသူနှင့်ရင်းနှီးဖော်ရွေသောဇတ်ကောင်များသို့အပြည့်အဝရောက်ရှိသွားခြင်းဖြစ်သည်။
ကယ်ဆယ်ရေး Wings ရှိလေယာဉ်အသစ်များကိုရယူပါ
Rescue Wings မှာဆက်ပြီးတိုးတက်နေမယ်ဆိုရင်ရွေးစရာရှိလိမ့်မယ် ဂျက်လေယာဉ်များကဲ့သို့အေးမြသောလေယာဉ်အသစ်များဝယ်ယူပါ တွန်းအားပေးရန်, ကိုယ်ပျောက်လေယာဉ်, UFOs နှင့်တစ် ဦး avocado-shaped ကုန်တင်ပင်ရန်။
ဤသို့ဖြစ်နိုင်ရန်သင်သည်အနည်းဆုံးကြယ်နှစ်လုံးဖြင့်မစ်ရှင်တစ်ခုစီပြီးဆုံးရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ, သင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ် အဲဒါကိုဖြည့်စွက်ရန်အားလုံးကိုမီးငြိမ်းသတ် ကြယ်သုံးပွင့်နှင့်အတူ။ သင်သည်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်မဆိုမီးကိုလွမ်းဆွတ်ပါက၊ မစ်ရှင်သည်ကြယ်တစ်လုံးသို့မဟုတ်နှစ်လုံးဖြင့်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့အကြွေးကိုရန်ရှိသည် မစ်ရှင်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်က နှင့်မစ်ရှင်4ရိုက်ထည့်သောသူတို့အားကွဲပြားခြားနားသောပတ်ဝန်းကျင်။ အားလုံးသည်အဆင့်သုံးဆင့် ဆက်၍ ကြယ်သုံးပွင့်ဖြင့်အဆုံးသတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ မဟုတ်ပါကသင်သည်မစ်ရှင်သို့အကြိမ်ကြိမ်ပြန်သွားရလိမ့်မည်။
စုစုပေါင်း 15 အဆင့်ဆင့်
ဆိတ်ကွယ်ရာသူတို့အားမှလွဲ။ ကတည်းကခဏဂိမ်းရှိပါသည် သူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားသောမစ်ရှင်နှင့်အတူ 15 အဆင့်ဆင့်မီးသည်အလွန်အန္တရာယ်များသောအလွန်လေးနက်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီရန်မတူညီသော power-ups ၆ ခုပါသောလက်နက်တိုက်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ အခက်အခဲကွေးခြင်းသည်လုံးဝမဆိုးပါ။ ထို့ကြောင့်အစတွင်သင်လေယာဉ်၏ထိန်းချုပ်မှုကိုရရှိပြီး၎င်းသည်မီး၏အလယ်ဗဟိုသို့ကျရောက်စေရန်၎င်းသည်ရေလွှတ်တင်မှု၏ဒိုင်းနမစ်ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အဲဒါခေါင်းစဉ်တစ်ခု နည်းပညာပိုင်းအရအလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည် ရေခဲရေကန်တွေထဲနစ်မြုပ်သွားနိုင်တဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်နဲ့လေယာဉ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်။ အဆိုပါဗေဒအဆင့်ကိုတန်းတူအထိနှင့်ဂရပ်ဖစ်ခွေးဇာတ်ကောင်များအပြင်ငါတို့မိုthe်းတိမ်မှတဆင့်နှင့်ထိုထက်ပိုသောရေနေအချိန်လေးများအတွက်မောင်းနှင်မည့်လေယာဉ်ပေါ်တွင်ခြယ်သမဟုတ်သလိုခြယ်သသည်မဟုတ်တစ် ဦး အပြားအရောင်စတိုင်နှင့်အတူသရုပ်ဆောင်နေကြသည်။
Rescue Wings သည်ကစားရန်ဖိတ်ခေါ်သည့်ကောင်းမွန်စွာကစားနိုင်သောဂိမ်းဖြစ်သည် နောက်တစ်ခုကဂိမ်းတစ်ခု။ ဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာစွမ်းအင်အခြေခံသော Freemium ဖြစ်သည်။ Harry Potter: Wizards United၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းအင်ကိုဆက်လက်ကစားရန်လိုအပ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းကိုသင်ပြုလုပ်ပါကမကြာမီသင်သည် Android အတွက်ကောင်းမွန်သောခေါင်းစဉ်ကိုဆက်လက်ခံစားရန်စွမ်းအင်နှင့်အတူကောင်းမွန်သောဆုလာဘ်များပေးလိမ့်မည်။ သငျသညျမိုthe်းတိမ်ကိုဖြတ်ကူးခြင်းနှင့်တော၌ရှိသမျှသောမီးလောင်မှုအပေါငျးတို့သမီးကိုငြိမ်းစေဘို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့သူ့လေယာဉ်နှင့်အတူ Scruffy ခွေးကိုကူညီဖို့အချိန်ယူပြီး, ယခုပျံ!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » ဒီခွေးဟာ Scruffy ရဲ့လေယာဉ်ပေါ်ကမီးသတ်သမားဖြစ်ပြီးသင်ကယ်ဆယ်ရေး Wings မှာကူညီရမယ်။
Google Images သည် Android သို့ GIFs နှင့် Google application မှ GIF များကိုမျှဝေရန်ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်
[ဗွီဒီယို] Telegram အတွက်စတစ်ကာများကို Android မှတစ်ဆင့်မည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း။ (ကွန်ပျူတာမလိုပါ)